साईकलमा पापड बेच्दै हिंडे ऋतिक रोशन! | Glamour Nepal
फिल्मी न्युज / गसिप | बलिउड समाचार | साईकलमा पापड बेच्दै हिंडे ऋतिक रोशन!
साईकलमा पापड बेच्दै हिंडे ऋतिक रोशन!
बलिउड अभिनेता ऋतिक रोशन हालका दिनमा सामाजिक सञ्जालमा राम्रै छाएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको एक तस्वीरमा ऋतिकलाई चिन्न मुस्किल पर्छ। किनकी त्यो तस्वीरमा उनलाई साइकलमा पापड बेचिरहेको अवस्थामा देख्न सकिन्छ। बलिउडका कामूक हिरोको उपमा पाइसकेका ऋतिकको यो लुक्स देख्दा जोकोही पनि चकित परेका छन्।
उनी अरु केही कारणले नभई उनको नयाँ फिल्म ‘सुपर ३०’को कारण सामाजिक सञ्जालमा छाएका हुन्। यो फिल्मको हाल धमाधम छायांकन भइरहेको छ। यो फिल्म आईआईटीको प्रवेश परीक्षाको तयारी गर्ने चर्चित संस्थान पटनाको ‘सुपर ३०’ का संस्थापक गणितज्ञ आनन्द कुमारको जीवनीमा आधारित छ। यो फिल्ममा ऋतिकको लुक्सलाई दर्शकले निकै चासोपूर्वक हेरेका छन्।
फिल्मको सुटिङ हालका दिनमा जयपुरमा चलिरहेको छ। यसको केही भाग वनारसमा छायांकन भइसकेको छ। केही दिन अघि मात्र ऋतिकले फष्टलुक सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेका थिए। यो फिल्ममा ऋतिक पहिलोपटक शिक्षकको भूमिकामा देखिँदैछन्। फिल्मको निर्देशन विकास बहल गरिरहेका छन्। ‘सुपर ३०’ यसै वर्षको नोभेम्बरमा रिलिज हुनेछ।
बलिउड छाड्दै प्रियंका चोपडा
बलिउडकी सुन्दरी नायिका प्रियंका चोपडाले बलिउड छाडेर हलिउड जाने भएकी छन् । तर उनको बलिउड छोडाई सधैंका लागि...
अरबाज र सनीबीचको हट केमेस्ट्री – तेरा इन्तजार
सलमान खानका भाइ अरबाज खान निर्माताका रूपमा सफल दरिए पनि अभिनेताका रूपमा भने कहिल्यै चलेनन्। बलिउडमा...
चर्चित निर्माता डी रामाको निधन
बलिउडका चर्चित फिल्म निर्माता तथा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विजेता डी रामा नायडूको बुधबार निधन भएको छ ।...
फरहान र जुहीलाई दादा फाल्के
अभिनेता तथा फिल्म निर्माता फरहान अख्तर र अभिनेत्री जुही चावलालाई यस वर्षको ‘दादासाहेब फाल्के अकादमी...
भारतीय चर्चित शो ‘द ग्रेट इंडियन लाफ्टर च्यालेन्ज ५’ को नयाँ प्रोमो सार्वजनिक भएको छ। जहाँ बलिउड अभिनेता...
इन्टरनेटमा हिट आलिया
एन्टी वायरेस बनाउने एक भारतीय कम्पनीले गरेको मत सर्वेक्षणमा अभिनेत्री आलिया भट्ट इन्टरनेटमा सर्वाधिक...